Amna OSA ganna 33, ija pirezidantii isaa kan jalqabaatin - BBC News Afaan Oromoo
Amna OSA ganna 33, ija pirezidantii isaa kan jalqabaatin
27 Adooleessa 2019
Korri Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Beektota kora kanarratti argaman keessaa tokko pirezidantii OSA jalqabaa kan ta'an Dr Ismaa'el Abdullaahii isaan tokko.
Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan dhalatan Dr Ismaa'eel ganna 50 booda gara biyyaatti kan deebi'an. Ganna 50 dura baqaan kan biyyaa bahan Dr Ismaa'el biyyoota Awurooppaa keessa waggoota hedduuf baqataa ta'anii akka jiraatan BBC'tti himaniiru.
Boodas barnootaaf gara Ameerikaa deemanii hanga digirii sadaffaatti barataniiru.
'Information Science' ykn Saayinsii Odeeffannoon PhD isaanii kan dalagan Dr Ismaa'el, waggoota 30 darbaniif yuunivarsitiiwwan biyya Ameerikaa sadi keessatti barsiisummaan dalaganii jiru.
Yaa'iin Waldaa Qorannoo Oromoo waggaa 33 booda Finfinneetti taasifame
'Qarreefi Qeerroon OSA biyya akka galuuf haarsaa kanfalan galata qabu'
Wayita ammaas 'North Carolina Central University' keessaa barsiisaa akka jiran nutti himan.
Bara 1986 'Oromo Studies Group' maqaa jedhuun kan eegale OSA'n bara 1990 wayita gara 'Oromo Studies Association' jedhame moggaafamu pireezidantii jalqabaa ta'uun filaman.
Yeroos OSA'n barattoota hedduu ofitti dabalee gama qorannoo fi qo'annoon jabaatee deemuu kan eegale jedhu Dr Ismaa'el.
Waggoota lama isaan pireezidantii OSA turanitti wanni guddaan hojjetame tokkummaa beektota Oromoo Ameerikaa fi biyyoota kaan keessa jiranii cimsuun akka quba wal qabaatan gochuudha jedhu.
Korri OSA waggaa waggaan taa'amus qulqullinaan jabaatee akka itti fufu taasifne jedhu.
OSA'n waggoota 33 darbeef "waan Oromoon taate, gama aadaa, seenaa fi siyaasaan qoratee barreessee dubbisiisaa ture" jedhu Dr Ismaa'el.
Oromoon waggoota dheeraaf biyya Itoophiyaa keessatti cunqurfamaa ture kan jedhan Dr Ismaa'el, OSA'n uummat Oromoo barsiisee dammaqse jedhan.
"OSA'n uummanni Oromoo eenyummaa ofii beekee, Oromummaa isaa jaalatee, of kabajee ormaanis akka kabajamu karra bane" jedhu.
Oromoon akka of baru qofa osoo hin taane, Oromoon namoota kaaniinis akka beekamu OSA'n hojii guddaa hojjeteera jedhu.
Aadde Kuulanii Jaalataa: 'OSA'n seenaa mootii cabsee seenaa sabaa barreesse'
Dhaabni waggoota dheeraaf hojii qorannoo fi qo'annoo hojjechaa ture kun yeroo jalqabaaf gara biyyaatti deebi'uu isaatti hedduu gammadoo akka ta'an dubbatu.
"Waan ganna hedduuf hawwaa turretu nuuf milkaa'e. Gammachuu koo hagana jedhee ibsuu hin danda'u."
"Oromiyaa keessatti ifa arguun hawwii keenya ture, hogguu waan hawwite argatte gammachuu hedduutu sitti dhagaahama. Ani halkan rafeetuu hin bulle," jedhan.
"OSA'n ganna 33 booda anis ganna 50 booda biyyatti deebinee biyya ofii saba ofiitti ida'amuun gammachuu guddaadha" jedhan.
"Barnootaa fi beekumsatti haa jabaannu"
Duraan beektota Oromoo biyya keessa jiran waliin addaan cinnee turre kan jedhan Dr Ismaa'el, amma walitti deebine akkamiin beekumsi Oromoo bal'atee, guddatee akka mul'atu gochuurratti tumsuu qabna jedhan.
Wayitaa ammaa namuu Oromiyaa keessatti waan fedhe barreessuu fi dubbachuuf carraa qabutti fayyadamuun akkamiin hojiin qorannoo fi qo'annoo akkasumas barnootaa OSA'n hojjetaa ture babal'ate itti fufuu qaba kan jedhurratti fuulleffachuu qabnas jedhaniiru.
Akka dhunfaatti ulaa banamtetti fayyadamuun beekumsa biyya alaatti horatan deddeebi'anii barattootaafis ta'e uummata Oromoof qooduufi tajaajiluuf karoora akka qabanis himaniiru.
Elemoo Alii ganna 40 ol booda gara biyyaa deebi'e
Biyya ijaaruun siyaasaa qofaan miti kan jedhan Dr Ismaa'el, barnootni qooda guddaa akka qabu dubbatu.
"Yoo Gadaa jennes, yoo Diimokiraasii jennes, biyyoota alaa keessatti wanti agarres biyya ijaaruunis ta'e saba ijaaruun barnootaa fi beekumsa irratti rarra'a."
Kanaaf barnootaa fi beekumsatti haa jabaannu, aadaa ofii haa beeknu, haa jabeessinu, ogummaa hundaanuu beekumsaan of haa ijaarru jedhu hayyuun kun.
OSA'nis fuulduraaf kanarratti jabaatee hojjechuu akka qabu dhaaman.
Yaa'iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale
26 Adooleessa 2019
24 Adooleessa 2019
'Waldaan Qorannoo Oromoo odeessa seenaa kan mootii cabsuun kan sabaa barreesse'
Elemoo Alii: 'Ganama yeroon hirribaa dammaqu gitaara ykn kiboordii taphachuun araada'
Hoomaan awaannisaa Yemeniifi Somaaliilaandirraa Itiyoophiyaa gale
Bakakkaan namoota afur ajjeessee, 100 maddeesse